Kala Bixin Jeexdin Xeebta Cocoa, Daraasad Ku Saabsan Canal Kala Bixin
Muck Oo Bilaabay Xeebta Cocoa Beach
Source: Florida Maanta
Bartamaha Sands waxay adeegsanayaan sumadda Ellicott® Singing Ladder dredge si loo gaarsiiyo horumar muhiim ah toddobaadkan lagu daweynayo Indian River Lagoon, oo nuugaysa sanado badan oo xabagta u eg majones-ka kanaalka Cocoa Beach.
Khamiista, qulqulaya ayaa bilaabatay markii ay shaqaalaha bilaabeen inay ka saaraan buushash dhisme ka kooban kanaal ku teedsan bannaanka 'Banana River Lagoon'.
Mashruuca $ 2 milyan waxaa ku jira xiritaanka kanaalka Jack / Kent laga bilaabo 8 am ilaa 5 pm Isniinta ilaa Jimcaha afarta illaa lix toddobaad ee soo socota, sida laga soo xigtay Waaxda Maareynta Kheyraadka Dabiiciga ee Degmada Brevard.
Wejiga koowaad ee qulqulaya ayaa ka bilaabmay woqooyiga Cocoa Beach kanaalka u dhexeeya Jack Drive iyo Kent Dr.
Mashruucu wuxuu ku sii socon doonaa koonfurta, isagoo baabi'iyay shan kanaalo oo kale.
Central Sand Inc., oo fadhigeedu yahay Magaalada Brevard County, ayaa ka saari doonta 83,000 dhudhun yar oo xabbo ah oo ka kooban lix kanaal, iyaga oo dhigaya boobka ku dhaca 10 acres oo ah dhul ay magaaladu leedahay oo ku yaal waqooyiga magaalada Brightwaters Drive.
Laga soo bilaabo halkaas, ka dib markii muusku dego, waxaa loo qaadi doonaa goob joogto ah oo u dhaw garoonka diyaaradaha ee Gobolka Xeebta ee looyaqaano Titusville.
Mashruucu wuxuu iskaashi la leeyahay magaalada Cocoa Beach.
Muck - waxyaalaha dhirta qudhmay, dhoobada, iyo carrada meelaha dhismuhu ka socdo - ayaa loo ekeysiiyay "majones madow". Waxay ka celisaa qoraxda qorraxda badda waxayna gacan ka geysataa burburka bakteeriyada, oo cunaysa oksijiinta ku jirta biyaha, taasoo kalluunka dileysa.
Isu duwaha barnaamijyada doonyaha iyo marin biyoodka Matt Culver ayaa yiri "kanaal walba wuxuu qaadan doonaa ilaa seddex isbuuc (in la qodo)."
Muwaadiniinta ku nool koonfurta koonfurta ee 'Brightwaters Drive' waa inay filayaan xoogaa taraafikada gawaarida iyo boodhka, saraakiisha ayaa yiri.
"Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican ee aan u yareyn karnaa saameynta ay ku yeelan karaan iyaga," ayuu yiri Wayne Carragino, oo ah madaxa mashruuca magaalada.
"Waxaa lagu celinayaa xaaladdii hore markii la dhammeeyay," ayuu ka yiri goobta wax dhaca.
Mashruucu waa mid ka mid ah shan mashruuc oo burbursan oo meesha ka saari doona isku-darka 1.4 milyan oo dhudhun oo laba jibbaaran ah oo loo yaqaan 'lagoon', muck ku filan oo lagu buuxiyo barkadda dabaasha-cabbirkoodu yahay ee ku habboon Xilliga 437.
Tuubbo sideed-inji ah ayaa ka soo qaadda qulqulka ka soo qulqulaya meesha loo hayo
Caanaha adkaha ah way degaan oo biyuhu waa la sifeeyaa ka hor intaadan ku soo noqon meesha laamiga.
U doodayaasha Lagoon waxay rajeyneyaan inay gacan ka geysan doonto bilaabida daaweynta bogsashada lagoon ee sanadaha ubaxyada algae. A "ubax weyn" ee algae cagaaran 2011 iyo ubaxyada dambe ee algae waxay dileen 60 boqolkiiba badmareenka badda, oo ah barometerka caafimaadka deegaanka. Boqolaal manate, dolphins, iyo pelicans ayaa sidoo kale dhintey xilligii ubaxyada.
2014 iyo 2015 Sharci dejinta Florida waxay u qoondeeyeen isku darka $ 20 milyan oo loogu talagay shan goobood: afka Turkiga Creek ee Palm Bay; kanaallada ku teedsan Sykes Creek iyo Xeebta Cocoa; kanaalka weyn iyo kanaalada laxiriira ee kuyaala Satalaytka Xeebta; iyo biyaha ku dhow meel u dhow dusha doonta Doonta Jones ee Mims.
Maalgalinta waxaa ka mid ah $ 2.5 milyan oo loogu talagalay Machadka Farsamada ee Florida si loo darsado mashruuca ka hor iyo ka dib mashruucii burburay ee Turkiga Creek si loo cabbiro faa'iidooyinka deegaanka.
Mashruuca Turkiga Creek ayaa la rajaynayaa inuu bilowdo bartamaha bisha Febraayo. Saraakiisha ayaa rajeynaya inay dhameystiraan mashruuca bisha Maajo marka ay xeerarka deegaanka ay ka hortagaan qulqulka sababta oo ah dhismayaasha qulqulaya.
Biyuhu waxay ku sifeeyaan mishinka fiilada ka dib dareeraha adag waxay ku degaan aag ballaaran.
Muck - walxaha dhirta qudhmay, dhoobada iyo carrada goobaha dhismaha - ayaa loo ekeysiiyay "majones madow". Waxay ka celisaa qoraxda qorraxda badda waxayna gacan ka geysataa burburka bakteeriyada, oo cunaysa oksijiinta ku jirta biyaha, taasoo kalluunka dileysa.
Ellicott® Swinging sallaan dredge ee waqooyiga Cocoa Beach
U doodayaasha Lagoon waxay rajeyneyaan inay gacan ka geysan doonto bilaabida daaweynta bogsashada lagoon ee sanadaha ubaxyada algae. A “superbloom” of algae green in 2011 iyo xiga algae bunni ubaxyada ayaa diley boqolkiiba 60 badda badda, oo ah barometerka caafimaadka dhirta. Boqolaal manate, dolphins iyo pelicans ayaa sidoo kale dhintey xilligii ubaxyada.
Maalgelinta waxaa ka mid ah $ 2.5 milyan oo loo qoondeeyay Machadka Farsamada ee Florida si loo barto ka hor iyo ka dib mashruuca qodista ee Turkiga Creek si loo cabiro faa'iidooyinka deegaanka.
Hubso inaad fiidyowga aragto.
Dib loo daabacay Florida Maanta
Ku bilow Mashruuca Dayactirka Jid-Baddaada Ellicott